Real Madrid oo 2-0 kaga badisay Granada | Berberanews.com
Home CAYAARO Real Madrid oo 2-0 kaga badisay Granada
Real Madrid oo 2-0 kaga badisay Granada
Goolal ka kala yimid Casemiro iyo Karim Benzema ayaa Real Madrid ka caawisay inay guul ka gaadho Granada taasoo ka dhigeysa inay isku dhibco noqdaan kooxda hogaanka heysa ee Atletico Madrid oo hogaanka u heysa La Liga.
Kadib qeybtii hore, Real ayaa hogaanka qabatay markii Casemiro uu madax ku dhaliyay kubad uu ka soo karoosay Marco Asensio dhanka bidix.
Benzema ayaa guushan ku gaadhay qaybtii dambe ee ciyaarta isaga oo kubbad joog hoose ah oo ka socota 20 yaardi u jirsaday goolkiisii ​​8-aad ee horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan.
Fursadii ugu fiicneyd ee Granada ayaa ku dhacday Antonio Puertas laakiin isagu xilli hore ayuu toogtay. Fursaddaasi waxay timid ka dib markii 28 ilbiriqsi oo kaliya ka dib markii Real ay bilaabatay, Raphael Varane uu lumiyay kubad haysashadiisa isla markaana weeraryahankii hore ee Tottenham Roberto Soldado uu u dhigay Puertas, laakiin, isaga oo aan calaamadeysnayn, ayuu si qumman u toogtay.
Tani waxay aheyd guushoodii lixaad oo xidhiidh ah tartamada oo dhan iyo guushoodii shanaad oo isku xigta ee La Liga oo ay ku biiraan kooxda hogaanka heysa ee Atletico iyagoo leh 32 dhibcood, inkastoo Real ay ciyaartay labo kulan in ka badan kooxda ay xafiiltamaan.
ciyaaraha la liga
Previous articleMidowga Yurub iyo Ingiriiska oo heshiis gaadhay
Next articleWarbixin gabadh ku shaqaysata xirfadda laydhka